စတင်ပြုလုပ်ခြင်းယဉျကြေးမှုCogito ergo sum အား, ဒါမှမဟုတ်တဲ့အခါမှာအသိဉာဏ်ဘဝကိုရှာတွေ့၏အတွေးအခေါ်များကွာကျွန်တော်တို့ရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်ရာမှ
3 စက်တင်ဘာလ 2018 Belz ယဉျကြေးမှု 1
"ငါသည်ကြောင့်ငါဖြစ်၏ထင်", ငါကျင့်ကိုကျင့်လျှင် .. အဘယ်ကြောင့်ခွင့်ပြုအပေါင်းတို့၏အကျိုးအတွက်ကျနော်တို့ဦးတည်သွားစေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အခွင့်အရေးကိုအားမနာသူတွေထဲမှာဖြန့်ဝေနေသည် ?.
တစ်ခုခုဖြစ်ပျက်မယ်လို့ XXI ရာစုအတှေးအချေါ, ငါတို့ကိုကျောက်ခဲတို့ကိုပစ်ခြင်းငှါပြန်လာသောသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မပြီးဆုံးသေးသောဖြစ်တည်မှုပေးပို့ခြင်းမဟုတ်ဘဲအလွန်စွန့်စားအမှန်ပင်အင်္ဂါဂြိုဟ်ကို "ဆွန်း" လကဲ့သို့ ensaimada ကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့မူဝါဒကို selenite သူတို့ကိုဖေါ်ပြခြင်း Martian မှလက်နက်ချဖို့မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်လည်းကောင်းတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး သူတို့အားကျွန်တော်တို့ကိုအုပ်ချုပ်သောသူဖြစ်သောကြောင့်, ဒါဝေးအေးစက်နေတဲ့်ရောက်မှုနှင့်အတူတဖြည်းဖြည်းထွက်ခွာသွားနှင့်မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာစာရင်းဇယားများတွင်နိုင်အောင်လုပ်နေတာမှရှောင်ကြဉ်ပါလိမ့်မယ်သောသူတို့အားဝင်ရောက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းခရီးသွားလုပ်ငန်း၏ဖယ်ရှားရေးဖြေလျှော့ရန်စပိန်အတွက်အထုပ်အားလပ်ရက်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်နိုင် သူတို့က, အခြားသူများကိုသာသူတို့က IMSERSO သို့ reintegrated မည်ဖြစ်ကြောင်းပေမယ့်, access 10 ယူရိုသန်းပေးဆောင်ဖို့အားလုံး contrives ဖြစ်သည့်အညစ်ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒ၏နောက်လိုက်များအကြိုးရှိကြောင်းသမိုင်းမှတ်ဉာဏ်၏အပြောအဆိုအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေအမှုအရာတို့တွင်အလွန်အလုပ်များနေကြသည် ပညာရေးသို့မဟုတ်သင်ကြားမှု, အရာအားလုံးမည်သူမဆို chickweed ယုံကြည်စိတ်ချထက်အများကြီးပိုကောင်းမရှိဘဲဖြန့်ဝေကြောင်းဒါ။
နှင့်မကြာသေးမီကဆိုကြောင်းငြင်းဆိုခဲ့သည်တိုင်အောင်, ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်ခြောက်သွေ့ဆုံးဒေသများနိုင်ငံများအသင်းမပါဘဲအပါအဝင်သေမင်းနှင့်တစ်ကြောက်မက်ဘွယ်သောမိုးခေါင်ခံစားခဲ့ရသည့်အပေါ်အနီရောင်ဂြိုလ်ပေါ်ရေရှာတွေ့အတွက် Babel Canaveral ကြီးမားဘတ်ဂျက်၏ရဲတိုက်ကနေဖြုန်းနေချိန်မှာ သုညထောက်လှမ်းရေးကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်အာရုံခံထောက်လှမ်းရန်ပျက်ကွက်ခြင်းဖြင့်ယူနိုက်တက်ဆန္ဒပြ, ငါတို့သည်မိုက်သောသူ၏လက်၌နေသောနားလည်စေသည်သောဤဦးခေါင်းမှအနည်းဆုံးလူတို့လက်ကိုကိုင်ပြီးခြင်းမရှိဘဲဖြစ်ပျက်ဖို့ခွင့်ပြုသူတို့ကိုယ်သူတို့အဘို့စဉ်းစားရန် ergo နိုင်စွမ်း, သူတို့ရှိပါကသူတို့ကိုပုံနာမည်ကျော်အစီအစဉ်ပြီးနောက်ဆက်လက်တစ်မောအိပ်ထဲကနေလန့်နိုးအောင်, သူတို့ကိုယ်ပိုင်နောင်တတို့ကကျွေးမွေးမမျှော်လင့်တဲ့သုတ်သင်ရှင်းလင်းခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ငရဲ၏ကောင်းကင်တမန်များကို justicieras တံပိုးမှုတျသံနှင့်အတူတစျနေ့ကအံ့အားသင့်ဖြစ်လာဖွယ်ရှိ မာရှယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျာမန်နှင့်ကိုယ်ကို ingratiate နှင့်မြို့ရိုးအထားပြီးနောက်များအတွက် "ကီး" ၏တခုအစပျိုးမှု ဆိုဗီယက်။
ကမ္ဘာဂြိုဟ်အပြင်ဘက်အသိဉာဏ်ဘဝကမ္ဘာမြေကိုရှာဖွေနေခြင်းနှင့်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်ရာဇဝတ်မှု psychopathy ၏သဲလွန်စတွေကိုရှင်းလင်းနှင့်အတူအာဏာရာထူးကိုင်သောသူတို့အားအမြော်အမြင်ရှိရှိ detect နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်, သငျသညျတခုမသိမမြင်နိုင်သောခန်းဆိုင်ရာတရားတော်များပါဝင်သည်မြင်ကွင်းမှာငါတို့အားတစုံတခုသောနေ့ရက်ကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်, ငါတို့သူဌေးကကြားနိုင်မဟုတျပါလျှင် သူသည်အနာပျောက်စေသောဖြစ်နိုင်ဘူးအရာကိုကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအာရုံစိုက်သင့်တယ်တစ်ခုခုကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကော်မတီအစေခံဖြစ်ရမယ်လို့ဖေါ်ပြခြင်းသည် Nuremberg ရုံးတင်စစ်ဆေးရန်သူ၏ကြံရာပါတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
အသစ်ကကမ္ဘာ၏ရှာဖွေတွေ့ရှိဦးခေါင်း, နှစ်နှင့်ကျနော်တို့ဝက်မထိုက်မတန်တရားခွင်နေဆဲဖြစ်သောတစ်ဦးပေါ်ပင်အတှေ့အကွုံ nano အချိန်လေး, ဝက်အူစဉ်နှင့်အညီ, ကျွန်ုပ်တို့အားဖြင့်ရေလောင်းနေတဲ့အိပ်မက်၏ asexual အစိတ်အပိုင်းများမဟုတ်လျှင်ကိုယျ့ကိုယျကိုတောင်းဆိုနေတာကိုစောင့်ရှောက် အက်ဆစ်အိပ်မက်ဆိုးများပေါက်သို့မဟုတ်ကြောင့်တောက်ပလ၏အမှောင်ဘက်ခြမ်းမှာနေထိုင်ကြစုန်း၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ lunera ၏မှန်, သင်အမှန်တကယ်ထင်နှင့်တည်ရှိနေပါလျှင်, သို့မဟုတ်ကျနော်တို့နေဆဲကျေးဇူးတင်စကား inconformismos mumbling နေကြသည်ကံကောင်းခံစားရဖို့, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားနည်းချက်ထုတ်လုပ်ယုံကြည် နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ homeostasis ဆက်လက်အဖြစ်ပျော်မွေ့, ထိုသို့ထံမှထွက်သွားအဖြစ်အသက်ရှင်ရာအရှိန်အဟုန်ကိုထိန်းချုပ် ကျနော်တို့လူကုန်ကူးနားလည်သဘောပေါက်ကြသူတစ်ဦးရှည်လျားသောအခမဲ့သူတို့ကျနော်တို့လွတ်လပ်ခွင့်နှင့်အခြားလူမှုရေး bullshit ခိုးသောဤအကြမ်းခံ lethargy ဖွင့်ဖို့သော့ခရှိပါကကျွန်တော်နေဆဲဖမ်းအိပ်မက်ရှိရာ wrapper ကိုချိုးဖောက်ရှောင်ကြောက်စိတ်ခံစားချက်များကိုဖွင့်ထုပ်ထဲကနေနိုးထဖို့သင့်တယ်မောင်း စိတ်ကူးယဉ်ပြီးပိုအစွမ်းထက်တီထွင်ဖန်တီးမှုသစ်ဆေးများနှင့်အတူလျှို့ဝှက်ဓါတ်ခွဲခန်း မှစ. , နှာခေါင်းရှောင်ရှားနောက်တဖန်အသစ်သောဖြစ်ပွားမှုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုခြောက်လှန့်ပြန်သည့်အတွက် WHO (ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့) ထားချက်အရ, သူတို့ကိုအရုပ်ဆိုးအဖုသွေးထွက်သို့မဟုတ်စွန့်ခွာနေစဉ် အီဘိုလာရောဂါ, အရှည်လျားစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသောဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တုပ်ကွေးရောဂါရောက်စေဖို့တစ်ရက်ထုပ်ပိုး inexplicamente ။
ကမ္ဘာ၏ကျိုးကြောင်း၏နိယာမနေဆဲကျွန်တော် fait accompli, ပိုင်းခြားသိမြင်လက်ခံလုံးလုံးလြားလြားငြင်းပယ်ဆက်လက်အဘယျသို့အကြားအငြင်းပွားရာ hippocampus တစ်ခု epidural နာကျင်မှု့မရှိတာနဲ့အမည်မသိအကျိုးဆက်များမှဆက်ပြောသည်အနည်းငယ်သတိမပြုမိသွားကြဖို့ကြိုးစားရန်အလုပ်မလုပ်ခြင်းနှင့်မဟုတ်မပြုခဲ့ အာရုံစူးစိုက်မှု, ဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့၏အားသာချက်ယူနိုင်ပါသည်သမျှချဉ်းကပ်မှုဆိုအမှန်တရားသို့မဟုတ်မုသာနှင့်အတူနှုတ်ခမ်းစူ, fractious ခံစားရဖို့အခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ပွီ, ဝိုင်းထားခြင်းကိုတစ်ပြည်နယ်လုံးကိုဒီမိုကရေစီလို့ခေါ်တဲ့ဖိနပ်နှင့်အတူပြီးခဲ့သည့် unworn ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ထိပ်တန်းဦးစားပေးအဖြစ်ကျန်းမာအားသာချက်, အတိုက်အခံဆိုအလံ၏နေစဉ်ရိတ်သိမ်းဆက်လက်အခြားသူတွေမဖြစ်လတံ့သော misnamed အတွေး၏မယုံကြည်သောအသုံးပြုမှု, အလုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်ရွယ်ချက်များပြသနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှိမျ့ခခြွငျး၏ရှုံးနိမ့်, ails အဘယျသို့ကနေကျုံ့ ကျွန်တော်တို့ကိုရှိတယ်လို့ကို "ရွှံ့၏ဘုရား" အပြစ်ပေးဖို့အုပ်စုဖွဲ့ညီညွတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခွန်အားနှင့်စစ်တိုက်ခြင်းငှါအလိုဆန္ဒ, အယောင်ဆောင်မန်ယူအသင်း၏နေဆဲကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနှင့်မျိုးဆက်သဘောတူညီမှုတစ်ခုမရှိခြင်း၏အားသာချက်ကိုယူပြီးနေစဉ်ချေမှုန်းရေးနိုငျဖြစ်ပါသည်, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များ၏ဘန်ကာသိမ်းပိုက်ဖျက်ဆီး, စွန့်ပစ်, အဆက်မပြတ်ကျနော်တို့ပြန်ပေးဆွဲခဲ့ကြကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေးရာမှကျနော်တို့ကပြိုကွဲမီးတောက်အားဖြင့်စကားကိုနားထောငျရှိစဉ်းစားတွေးခေါ်ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်သူတို့ချမှတ်မတည်ငြိမ်မှု, ထဲကအခြေခံချို့တဲ့အပြစ်မဲ့လူသားတွေကိုလုပ်နေတာထိခိုက်ပျက်စီးမှုများအတွက်ပေးဆောင်စေရာဘို့အဘယ်သူမျှမမွကွေီးသဲလွန်စ, မချန်မထားကြပါလျှင်ထိုသူတို့ကစားသုံးနိုင်ပါသည်။
ပင်ကိုအခြားသူများထိုသို့အလုပ်လုပ်ရန်အခွင့်အလမ်းရှိသည်, အရှင်သဘာဝလွန်အားထုတ်မှုအောင်မြင်ရန်သောသူအပေါငျးတို့နှငျ့ဆိုငျသောအဘယ်သူမျှမပိုလျှံစည်းစိမ်ကိုပယ်ရှားရအရေးကြီးသောညံ့ဖျင်းဖြန့်ဝေကြောင်းဆိုကြည်ကြည်အရှက်ထံမှတစ်ဦးစိတ်အေးလက်အေးလေထုကိုရှူရှိုက်ဖို့လိုအပ်တဲ့တက်ကြွဒဏ်ရာရ ဥပဒေရေးရာသေးပြန်စဉ်းစားတဲ့သူတွေကိုနှိပ်စက်မယ့်များ၏အစဉ်အဆက်စိတ်ကူးနှင့်အတူအရေးပေါ်တံခါးနားမှာအာဏာရှင်ပျောက်ကွယ်သွားဖို့, သငျသညျdegüello Bugle နှင့်ဗုံစကားကိုနားထောငျအခါတိုင်းမသိပေမယ့်, သင်းကွပ်အစိုးရများအနေဖြင့်တီထွင်ဖြစ်ကြောင်း သူတို့လို။ ထိုသို့ဖွစျစဉျတှငျ, သာ. ဆင်းရဲနေဆဲအတိတ်ထဲကနေသူတစ်ဦးဦး, selenite သို့မဟုတ်အင်္ဂါဂြိုဟ်, သူတို့ကတစ်ဦးလက်ကိုချေးတစ်ခုခုအတွက်ယုံကြည်ဖို့ဆက်လက်ဤသို့ သာ. ကြီးမြတ်ရိုသေလေးစားမှုနှင့် Self-လေးစားမှုအောင်မြင်ရန်အခွင့်အလမ်းအောင်မြင်ရန်နိုငျသောအိပ်မက်မက်ဖို့အတွက်ဆောက် သူတို့သိထားကြတာပါ။ ထိုလေးနက်သောဖြစ်ပါသည်, ယူဆဖို့နဲ့အတွေး၏အမြတ်အစွန်းများကပြန်လည်သက်ဝင်ဒီမရှိမဖြစ်အကဲဖြတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရှုပ်ထွေးသော၏ငရဲအတည်သောသရဲတစ္ဆေမကွယ်သက်တမ်းတိုးရန်တျကိုဖယျရှားအဖြစ်မတည်ရှိပါဘူး။
Bendavid သူ says:
4 မှ 2018 စက်တင်ဘာလ 06: 06
နှင့်ကုလသမဂ္ဂအဘို့အဖြစ် ... ငါရယ် !! သူတို့ကိုယ်တိုင်ရှိပါတယ်တဲ့သူပါလျှင်သူတို့က, လုံခြုံရေးကောင်စီအနေဖြင့်အဘယ်သို့ပြုရပါလိမ့်မယ်။ ဆိုလိုသည်မှာခန္ဓာကိုယ်ကယနေ့မအားလုံးလှေကိုစို့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပြီးအထဲမှာမြွေဆိုး၏နောက်ထပ်အသိုက် ..
အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်: တရုတ်, ပြင်သစ်, ရုရှား, ဗြိတိန်နှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံ
ဘိုလီးဗီးယား, အိုင်ဗရီကို့စ်, အီကွေတာဂီနီ, အီသီယိုးပီး, ကာဇက်စတန်, ကူဝိတ်, နယ်သာလန်, ပီရူး, ပိုလန်, ဆွီဒင် ..
9 ဧပြီလ 2019 2
Comparte este artículoTweet201 de ellos son policías. De entre los condenados, solo 45 son mujeres (frentea459 hombres), peseaque estas representan más de la mitad del funcionariado. En 2010, dos policías nacionales [ ... ]
29 သြဂုတ်လ 2018 1
ဒီartículoTweetRecordandoလီယိုနာဒို Favio Share, မည်သည့်နေ့ရက်ကိုမဖော်ပြတချို့ခက်ခဲခံစားချက်တွေကိုဖြေဆိုရန်ရှာဖွေနေသူတွေအတွက်သတိမပြုမိသွားပါဘယ်တော့မှသူ့သီခငျြးတစျဦးနားထောငျဖို့ကောင်းလှ၏။ အသုံးမပြုသော [ ... ]